I-Wanfenglin Scenic Area~~Guanfeng Xiaozhu~~Ikhaya Elihlakaniphile~~ Jabulela Okunethezekile~~ Umuzwa Wokuzijabulisa - I-Airbnb
I-Wanfenglin Scenic Area~~Guanfeng Xiaozhu~~Ikhaya Elihlakaniphile~~ Jabulela Okunethezekile~~ Umuzwa Wokuzijabulisa
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-红霞
U-红霞 Ungumbungazi ovelele
I-Guanfeng Xiaozhu itholakala e-Wanfeng Forest Scenic Area yase-Xingyi. Njalo ekuseni, i-Wanfeng Forest inombono we-panoramic.
Umnikazi wegumbi ufuna ukukuhlaba umxhwele ngemininingwane! Ikulethela injabulo enethezekile!
Izinto ezithandwayo zihlanganiswa endlini. Ngemva kokungena emnyango, qalisa i-Tmall Genie, udinga kuphela ukuthi: Tmall Genie, ngidlalele umculo, nemisindo yomculo ojabulisayo ezindlebeni zakho; ungakwazi futhi ukulawula ukushintsha nokukhanya kwe- ukukhanya ngezwi. Isibani saphansi segumbi lokuhlala singasekela ukushajwa okungenantambo kwamaselula amaningi, futhi umgqomo kadoti uthule futhi uyashintsha, okuvumela ubuchwepheshe ukuletha ukuphila kwakho kube lula. Igumbi lilungele imibuthano yabangane abathathu noma abahlanu, elifakwe umshini we-mahjong kagesi namakhadi okudlala.
Ikhishi lihlome ngokuphelele, amabhodwe namapani konke kuyatholakala, igedlela likagesi le-Xiaomi linamazinga angu-2 okugcina ukushisa namanzi abilayo, futhi lifakwe ikhabethe lokubulala amagciwane, elilula futhi elihlanzekile. Izipheki zikagesi zelayisi namahhavini kagesi zingahlangabezana nezidingo zakho ezimnandi. Itafula lokudlela lingagoqwa, futhi lingavulwa libe yitafula eliyindilinga lapho kunabantu abaningi, eline-turntable, futhi ubumnandi buzungeza, ukuze zonke izibiliboco zidluliselwe kuwo wonke umuntu. Phakathi netafula lokudlela kukhona umpheki wokungeniswa, xhuma ugesi bese ubeka ibhodwe elishisayo ledada le-mandarin ngokuqondile, ibhodwe elishisayo lizojabula!
Amakamelo amathathu okulala afakwe izikrini, izikrini zamafasitela kanye namakhethini amnyama ukuze uvikele omiyane ukuthi bangangeni ekamelweni Donsa izikrini ukuze uvumele ukugeza elangeni elithambile. I-master bedroom ifakwe itafula nesihlalo, esilungele abangani abanezingane ukwenza umsebenzi wabo wesikole. Ifasitela le-bay lifakwe ama-cushions e-bay window kanye netafula elincane, kuhle ukuthi abantu ababili baphuze. Igumbi lokulala lesibili likulungiselele isethi yetiye ye-Kung Fu. Abangane bayaxoxa futhi banambitha itiye ngesikhathi esisodwa, futhi basesimweni esihle sengqondo. Igumbi lokulala lesibili nalo lifakwe umcamelo wefasitela eliseceleni, othambile futhi oqinile. I-yoga emcamelweni iwuhlobo lokujabula!
Zombili izindlu zangasese zifakelwe izindlu zangasese ezihlakaniphile kanye namaphedi alahlwayo ukuze kuvikelwe inhlanzeko yakho. Igumbi lokugezela linamafasitela, ukujikeleza komoya okuhle, cishe alikho iphunga elingavamile. Izakhiwo zeshawa zifakelwe amakhanda eshawa nezinto zokufafaza eziphathwa ngesandla, futhi indlu iphakeme futhi inamanzi amaningi. Indlu yangasese enkulu ihlukanisa ezomile nezimanzi, ungajabulela izinhlobo ezi-4 zeshawa ezingeni le-spa. Wonke ahlome ngamathawula, amathawula okugeza, nezinto zamazinyo ezilahlwayo, zikulethela ulwazi lwehhotela nokufudumala kwekhaya.
I-Southwest Guizhou Miao kanye ne-Buyi Autonomous Prefecture ingeyomngcele we-Guizhou, Yunnan, kanye ne-Guangxi. I-Fenglin Yijing cishe isigamu sehora ngemoto ukusuka edolobheni lase-Xingyi, cishe imizuzu engama-20 ngemoto ukusuka esikhumulweni sezindiza i-Xingyi, futhi cishe ihora elingu-1 ngemoto ukusuka e-Xingyi Railway Station. Izinto eziseduze zihlanganisa i-Wanfeng Forest, iMaling River Canyon, i-Wanfeng Lake, i-Nidong Stone Forest, i-Lubuge, iThempeli le-Wanfo, kanye Nendawo Yangaphambili Yokuhlala Ka-He Yingqin.
Ngingumuntu othanda ukwenza abangani futhi ngithemba ukuba umngani nawe nge-Xiaozhu. Uma unezidingo, ungangithinta futhi ngizozama konke okusemandleni ami ukuzihlanganisa nokuzixazulula. Ngingakwazi ukuphendula izingcingo nama-imeyili akho noma nini.
Ngingumuntu othanda ukwenza abangani futhi ngithemba ukuba umngani nawe nge-Xiaozhu. Uma unezidingo, ungangithinta futhi ngizozama konke okusemandleni ami ukuzihlanganisa nokuzixaz…
U红霞 Ungumbungazi ovelele